जानिराखौ ! के पुरूषमा जस्तै महिलाको पनि स्व’प्न स्ख’लन हुन्छ ? - Mitho Khabar
जानिराखौ ! के पुरूषमा जस्तै महिलाको पनि स्व’प्न स्ख’लन हुन्छ ?
April 10, 2020 mithokhabarLeaveaComment on जानिराखौ ! के पुरूषमा जस्तै महिलाको पनि स्व’प्न स्ख’लन हुन्छ ?
पुरुषको किशोरावस्थामा शारीरिक तथा मा’नसिक परिवर्तन आएझैं किशोरीहरुको पनि शारीरिक तथा मान’सिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो। किशोरावस्थामा प्रवेश गरेसँगै महिलामा यौ’नको विषयमा कौ’तुहलता हुनु स्वाभाविकै हो। आफ्नो यौ’नाङ्गको वृद्धि–विकासले किशोरी आफैँलाई लज्जि’त बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा हार्मोनको उतारचढावका कारण व्यक्तिको बानीव्यवहारमा समेत परिवर्तन आउँछ।
किशोरी अवस्था सुरु भएसँगै स्त’नका आ’कार बढ्छन्। तर किशोरी अवस्थामा प्रवेश गरेका महिलाले स्त’न ठू’लो भएको देखाउन चाहँदैनन्। स्त’न भुक्क उठ्दा’ लाज उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले टाइट किसिमको कपडा लगाएर स्त’न सकेसम्म लुकाउन चाहन्छन्। किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका महिलाको उचाइ एक्कासि केही सेन्टिमिटर बढ्छ भने तौल पनि बढ्छ। जसले किशोरीको र’जश्वला हुने समयको संकेत गर्छ। किशोरावस्थामा प्रवेश गरेसँगै महिलाको यो’निको वरिपरी रौं’ प’लाउने, यो’निको आ’कार ठू’लो हुनेजस्ता प्रक्रिया चलिरहन्छन्।
किशोरावस्थामा प्रवेश गरेसँगै पुरुषमा पुरुषजन्य हार्मोन र महिलामा महिलाजन्य हार्मोनको निष्कासनमा वृद्धि हुन्छ। यस्ता हार्मोनको सक्रियताका कारण किशोर–किशोरीमा बढी चुलबुलपन हुनु स्वाभाविकै हो। शारीरिक वृद्धि–विकाससँगै यौ’नाङ्गको पनि वृद्धि–विकास हुने भएकाले यौ’न उ’त्तेजना आउनु स्वाभाविकै हो। यस्तो अवस्थामा पुरुषको मात्रै हैन महिलाको पनि रात्रि स्ख’लन हुन्छ, जसलाई स्व’प्न स्ख’लन भनिन्छ।
शारीरिक तथा मान’सिक विकास हुँदै जाँदा किशोरीको पनि विपरीत लिं’गी पुरुष यौ’नजो’डीप्रति आकर्षण बढ्न थाल्छ। किशोरावस्थामा यौ’न जोडीबीचको प्रेमभाव बढ्दै जान्छ। प्राकृतिक नियमकैै कारण यौ’न जोडीबीचमा भावनात्मकता त बढ्छ तर व्यावहारिक जीवनमा भने कलिलै उमेरमा गरेको यौ’नाकर्षण–प्रेम अनुत्पादक हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा यौ’न आ’कर्षण तथा यौ’न तृ’प्ति मेट्नका लागि यौ’न जोडी तयार हुन सक्छन्। जसले कानुनी तथा व्यावहारिक झमे’लामा फ’स्ने जोखि’म त्यत्तिकै हुन्छ। यौ’न भावका कारण व्यक्तिमा स्व’प्न स्ख’लन हुन्छ। जुन महिलाको हकमा पनि लागू हुन्छ।
महिलाको गौण स्व’प्न स्ख’लन
किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका महिलामा पनि रात्रि स्ख’लन हुनु स्वाभाविकै हो। तर महिलाको स्ख’लनलाई गौणरुपमा लिइन्छ। यौ’न क्रियाकलापको विचार तथा घ’टनालाई सपनामा देख्दा महिलामा स्व’प्न स्ख’लन हुन सक्छ। महिलामा स्व’प्न स्ख’लन भएको अवस्थामा यो’निबाट रसा’दी निस्किएर आफूले लगाएको तथा ओडेको–ओछ्याएको कपडामा दा’ग लाग्छ। महिलामा हुने यस्तो प्राकृतिक नियमलाई समस्याका रुपमा लिनु हुन्न। पुरुषको झैं महिलामा स्व’प्नस्ख’लन हुनु स्वाभाविक र प्राकृतिक प्रक्रिया हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।
स्व’प्न स्ख’लन हुनुपूर्व मस्तिष्कमा यौ’नको विचार पैदा हुन्छ। यौ’न विचार पैदा भएपछि यौ’न तृ’प्ति मेट्नका लागि मस्तिष्कमा रहेको ‘हाइपोथालामस’ र ‘पिट्युटरी’ ग्रन्थी हुँदै डिम्बा’शयबाट निष्कासन हुने महिलाजन्य हार्मोनको भूमिका हुन्छ। ‘फोलिकल स्टिमुलेटिङ’, ‘ल्युटेनाइजिङ’, ‘स्ट्रोजेन’, ‘प्रोजेस्टेरोन’जस्ता हार्मोनले यौना’ङ्गमा प्रभाव पारेका हुन्छन्। किशोरावस्था सुरु भएसँगै यी हार्मोनको सक्रियता बढ्नाले महिलामा यौ’न चाह’ना तथा यौ’न उत्ते’जना आउँछ। यौ’न तृप्ति मेट्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो। हार्मोनका सक्रियतासँगै मस्तिष्कमा यौ’न विचार पैदा भई सपनामा पुरुष यौ’न जोडीसँग यौ’न क्रियाकलाप गरेको कल्पना गर्दा स्व’प्न स्ख’लन हुन्छ।
कतिपय पुरुषलाई त महिलामा यस्तो स्ख’लन हुन्छ भन्ने जानकारी समेत हुँदैन। महिलालाई स्वप्न स्ख’लनको बारेमा आफ्ना अभिभावकले ज्ञान नदिँदा किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका महिला स्व’प्न स्ख’लनका कारण ड’राउने तथा मा’नसिक रुपमा त’नाव लिने समस्यामा समेत फ’स्न सक्छन्। किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका महिलालाई सपनामा स्ख’नल भई यो’निबाट चि’ल्लो पदार्थ यो’नीबाहिर निस्किएर भि’जिन्छ भन्ने कुरा उनीहरुको अनुभवले घट’ना र दृश्य घट’नाको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था छ।
तर ड’राउनुपर्ने तथा त’नाव लिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। महिलाको किशोरावस्थामा सुरु भएको स्व’प्न स्ख’लन प्रौढ अवस्थासम्म हुन्छ। अन्तिम र’जश्वला भइसकेपछि पनि महिलामा स्वप्न’स्ख’लनको क्रिया तथा प्रतिक्रिया हुनु सामान्य हो।
जसरी पुरुषलाई पुरुषको ‘स्वप्नस्ख’लनको अनुभूति हुन्छ, त्यसैगरी महिलालाई स्व’प्न स्ख’लन हुन्छ। स्व’प्न स्ख’लनको समयमा पुरुषको तुलनामा महिला कम स्ख’लन हुन्छ।
यौ’न जोडीबीच लामो समयसम्म यौ’न क्रियाकलाप तथा यौ’न स’म्पर्क नहुँदा स्व’प्न स्ख’लन बढी हुन्छ। तर यौ’न स्व’प्नको सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्न भने कठिन छ। सवै व्यक्तिमा स्व’प्न स्ख’लन नहुन सक्छ। त्यसैले महिलामा हुने स्व’प्न स्खल’नलाई स्वाभाविक तथा पाकृतिकरुपमा लिनुपर्छ। स्व’प्न स्ख’लन भएको अवस्थामा ड’राउनु तथा आत्ति’नु हुन्न। यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो।
विहेपछिको पहिलो अन्तरवार्तामा आँचल शर्माले उदिपकै अगाडि यसरी गरिन् पल शाहसँग को रिलेसनको खुलासा(भिडियो हेर्नुहोस)
र’क्सी सेवन गरेर यौ’नसम्व’न्ध राख्नुहुन्छ ? होसियार ! हुनसक्छ यस्ता ७ असरहरु,
कोरोना जान्‍न रोएर, बरू जान्छ धोएर भन्दै आइन् आस्था
April 23, 2020 mithokhabar
‘दस बहाने’ बोलको गीत रिमेक हुँदा टाइगर र श्रद्धाको आलोचना
आँचलका श्रीमान उदिपको फिलिपिनी पुर्व प्रेमिकाको तस्विर र बच्चा सार्बजनिक, आँचलले बताईन् वास्तविकता (भिडियो हेर्नुस्)